अनलाइन शपिंग | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: इन्टरनेटमा खरीदारी
Aliexpress.com बाट वस्तुहरू कसरी आदेश गर्ने?
कसरी aliexpress.com बाट चीजहरू अर्डर गर्ने? त्यहाँ तपाईले पहिले दर्ता गर्नु पर्छ, ठेगाना दर्साउनुहोस्। त्यसोभए तपाइँको मनपर्दो उत्पादन छनौट गर्नुहोस् र Qiwi वा Yandex मार्फत भुक्तान गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग एक Sberbank कार्ड छ, तपाईं स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ ...
वाइल्डबेरीको लागि प्रोमो कोड कसरी प्राप्त गर्ने भनेर मलाई बताउनुहोस्?
मलाई भन्नुहोस् कसरी वाईल्डबेरी प्रोमो कोड पाउने? ठीक छ, तिनीहरूले मेल वा फोनमा सन्देशहरू पठाउनुपर्दछ) केहि साइटहरूमा तपाईं स्किडको सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ, एउटामा मैले देखें कि लिंकमा क्लिक गरेर मात्र ...
पत्रहरू बिना ट्रयाक नम्बर 589335219517 ट्रयाक गर्ने?
अक्षर बिना ट्र्याक नम्बर 589335219517 कहाँ ट्र्याक गर्ने? 73131804199220 21.01.17१XNUMX१ XNUMX XNUMX२० हाम्रो देशमा पार्सल आउनु अघि ट्र्याक गरिनेछ। अर्को ट्र्याक छैन। कतै पनि बिक्रेताले ० sent/२१/१XNUMX मा पार्सल किन पठाए किन जब म ...
अमेजनमा वस्तुहरू कसरी खरीद गर्न, यदि यो रूसलाई डेलिभर गरिएको छैन भने? मध्यस्थहरू?
अमेजनमा कसरी चीज खरीद गर्ने यदि यो रसियामा पठाइएन भने? बिचौलिया? फेब्रुअरी १ ​​http://shopotam.ru/ http://www.dostami.ru/ मैले यो धेरै चोटि प्रयोग गरें, अब मात्र उनीहरूसँग केही प्राविधिक समस्याहरू छन्: //shopotam.ru/ अहिलेसम्म ...
aliexpress बाट कार्ड डेटा कसरी मेटाउने हो?
कसरी aliexpress बाट कार्ड डाटा मेटाउने? १) तपाईले केहि पनि छनौट गर्नुभयो। २) तपाईंले त्यसलाई टोकरीमा हाल्नुभयो र टोकरीमा जानुहोस्। )) "अर्डर प्लेस गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। )) फेरी तपाईले "अर्डर प्लेस गर्नुहोस्" थिच्नुहोस् (ताकि ...
मलाई साँच्चै सहयोग चाहिन्छ !!! के कसैले कहिल्यै एलेक्सप्रेसबाट आईफोनको आदेश दिएको छ?
मलाई वास्तवमै सहयोग चाहिन्छ !!! के कसैले कहिल्यै एलिसप्रेसबाट आईफोन अर्डर गरेको छ? yandex मा हेर्नुहोस् बजार, त्यहाँ बीस भित्र 5c थियो र एपीएल कोठामा 25 को लागि किन्नुहोस्, र मा ...
मास्को घरको फर्नीचर - समीक्षा
मस्को फर्नीचर हाउस - समीक्षा म यो स्टोरको पार गरी सकेको छैन। तर कम्पनीको उमेर र साइटको हेराईको आधारमा, सबै कुरा ठीक हुनुपर्छ। जहाँसम्म, अवश्य पनि, यहाँ कोही भाग्यमानी छ! 🙂 ...
यस साइट Fireboxclub.com मा चीज किनेको छ? तपाईं चीजको अवस्थालाई के भन्न सक्नुहुन्छ?
यस साइट fireboxclub.com मा कसले सामानहरू किन्नुभयो? तपाईं गुणस्तरको अवस्थाको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? कम्पनी जीले भरिएको छ ... सामानहरू बौलाहा चीना हो, गुणवत्ता कतै पनि खराब छैन, म सुझाव दिउँदिन यो एक अनलाइन स्टोर कामदार जस्तो लाग्छ अन्तमा ...
क्या तपाईं साइट मा एक खरीद को खरीद 7.ru?
के तपाईंले बीट्स ..ru मा खरीद गर्नुभयो? १००% चिनियाँ हेडफोन ... वास्तविक मूल्य ru०० रूबलसम्म छ, सेटमा ru० रूबलको लागि एक चिनियाँ खेलाडी र ru० रूबलको लागि एक चिनियाँ चक्कु समावेश छ, यी सबै एलिएक्सप्रेसमा किन्न सकिन्छ ...
बिन्दुहरू र कुपनहरू एलेक्सिक्सका लागि यो के हो?
पोइन्ट्स र कूपनहरू एलीएक्सप्रेसका लागि के हो? यहाँ हेर्नुहोस् प्रोजेक्ट प्रशासनको निर्णय द्वारा लिंक अवरुद्ध छ। तपाई ie% वा अधिक छुटको साथ Aliexpres मा कुनै पनि सामान किन्न सक्नुहुनेछ। कैशब्याक.एपएन.बीजे /?inviter=7e कुपन एक विशेष हो ...
जहाँ तपाईं सजिलो सीएसहरूको लागि सस्ता खरीद गर्न सक्नुहुनेछ सस्ता
जहाँ तपाईं सीएस हतियार साइट रूलेका लागि सस्तो खाल किन्न सक्नुहुन्छ। साइट आफैंमा: csgowar नेट सम्बद्ध प्रोग्राम कोड: Aiz322 विवरण साइटमा जानुहोस्, एफिलियट प्रोग्राम ट्याबमा जानुहोस्। र हामी आफैंमा रोल ...
Aliexpress मा कुराहरू कसरी ट्रयाक गर्ने?
Aliexpress मा कसरी चीजहरू ट्र्याक गर्ने? nkjcvnklsjzbmz zjkf;, z ljghdf3283732sbs ट्र्याक नम्बर द्वारा एलिप्रेसबाट पार्सल कसरी ट्र्याक गर्ने ?! यस समयमा धेरै सेवा र प्रोग्रामहरू छन् जसले पार्सलहरू ट्र्याक गर्न क्षमता प्रदान गर्दछ, तर म सुझाव दिन्छु ...
52 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,506 प्रश्नहरू।